SlayerAI: Kusarudza Mazhinji Mazwi Akasiyana Iwe Unoda Kuhwina | Martech Zone
Chipiri, January 18, 2022 Chipiri, January 18, 2022 Douglas Karr
Paavhareji, mashanu nguva zhinji vanhu vanoverenga musoro wenyaya se verenga body copy. Kana wanyora musoro wenyaya, wapedza masendi makumi masere padhora rako.
David Ogilvy, Ogilvy pane Kushambadzira
Slayer intelligence yekugadzira (AI) chigadzirwa chinofanotaura kuti kubatanidza musoro kune vateereri vakapihwa. Somuenzaniso, inonzwisisa kuti denim machinda anotyisa ndivo 15% kuwedzera kushamwaridzana kupfuura dhimeni mapfupi mapfupi mumusika wemafashoni. Slayer inogadzira mameseji zvichibva pane iyo kopi ichaonekwa, ichikupa yakarongedzerwa mhinduro kuti uwedzere budiriro yevateereri vako. Iyo AI inoshanda nekuongorora zviuru zvemishandirapamwe yapfuura uye zvinyorwa, pamwe nekubudirira kwavo. Inobva yadzidziswa kuziva kana chinyorwa chiri kuita kana kuti kwete.
SlayerAI Nyaya Yekudzidza
Mumwe muenzaniso wemashandisirwo ari kuitwa Slayer waive kuwedzera mutengi kunobata 30% yekambani inotengeswa pachena cybersecurity, OneSpan. OneSpan yakashandisa Slayer kukwidziridza mitsara yezvinyorwa zveemail nekuona iyo inonyanya kuita yekubvumidza:
Sei SlayerAI yakakosha?
Kwemakore matatu apfuura huwandu hwekopi huri kugadzirwa hwave yakawedzera 10x pamusoro.
Iyo Global Digital Content Creation Market saizi inotarisirwa kusvika US$ 38.2 bhiriyoni panosvika 2030 paCAGR ye12% panguva ya2020 na2030. Nekuda kwekuuya kwechokwadi chaicho uye hungwaru hwekunyepedzera, maturusi ekugadzira zvemadhijitari ari kupupurira kuwedzera kwechimbichimbi kwekuda. panguva yekufanotaura.
InsightSLICE, Dhijitari Yezvekusika Musika
Uku kukura kwave kuchifambiswa nezvinhu zvakati wandei - kuwedzera kwekuchinja kune kutengeserana kwepamhepo, kuwanda kwevashandisi vatsva vanouya online kekutanga, uye kugona kugadzira kopi neAI.
Kune tarenda uye maturusi akawanda kupfuura nakare kose kugadzira zvirimo, uye shanduko yekutengeserana yepamhepo iri kuwedzera kudiwa kwekopi… uye iri kuramba ichikura.
SlayerAI inokupa iwe kugona kuwirirana nevateereri vako mugungwa rezvakachipa zvakagadzirwa. Neizvi, kutaurirana kukuru kunova simba guru. Kuti umire nekopi yako, zvinotora zvinopfuura kungoita kuti uve negirama yakakodzera uye zviperengo, kana kungotevera nzira dzakanakisa dzekushambadzira, nekuti kupera kwemutambo ndeyekukwanisa kusangana nevateereri vako muniche yavo.
Parizvino, dambudziko rekushaikwa kwekutaura kuri kugadziriswa kuburikidza nekupindira kwemaoko (semuenzaniso, mupepeti wevanhu) uye kushandisa mamwe maturusi esoftware ayo anokupa makonikosheni akajairwa (Grammarly ndiyo inonyanya kufarirwa). Nepo vapepeti vevanhu vachigona kuve vakanaka uye vakanyanya-zvakananga, kutsvaga nyanzvi yekukopa kunogona kudhura uye kune basa rakawanda chete ravanogona kuita.
SlayerAI ndiye akakodzera mubatsiri, kunyanya kana chinangwa chiri chekuti mishandirapamwe yako yekushambadzira iite nemazvo, nguva dzose.
Ndiani SlayerAI akanakira?
SlayerAI chishandiso chakanakisa kune chero munhu anonyora kopi online. Parizvino, vashandisi veSlayer vanosanganisira mabhizinesi makuru, mabhizinesi madiki, masangano ekushambadzira, uye ega ega vanyori vanyori.
Iyo AI yakasununguka kushandisa kwenguva shoma, uye inogona kubatsira ipapo kugadzirisa zvirimo, kuwedzera kune:
Kuita mavhiki ekuyedza A / B mumaminitsi pane mwedzi
Kuongorora zviperengo pane zvazvinoita, pachinzvimbo chegirama
Instant quality control kune junior copywriters
Kiyi yekunyora yakanaka kopi kuona izvo vateereri vako vanoda kutanga, uyezve nekubatanidza brand yako. Ndosaka Slayer akagadzira kugona kusarudza kubva kune gumi nemaviri evateereri vanotarisirwa; kubva kuvanhu vanofarira crypto, kune avo vanofarira fashoni, runako, kusimba, mota, kugadziridza imba nezvimwe.
Yedu AI yakaedzwa zvakanyanya neboka diki revashandisi beta, uye mhedzisiro yave inoshamisa. Kana zvaibatsira kutanga wedzera mitengo yakavhurika kubva pa12% kusvika 19%, kana kubatsira sangano rekutengesa kukura nekuvabvumira kupedza nguva shoma vachiongorora basa ravo.
Unoda kunyora zvirinani misoro yewebhusaiti, mitsara yezvidzidzo, mazita ebhulogi, kopi yekushambadzira, mameseji emagariro uye SMS? Slayer akakufukidza kumativi ese.
SlayerAI inoshanda sei?
Kushandisa Slayer kuri nyore, ingo sainira yemahara account, login, uyezve:
Sarudza vateereri vako
Isa kopi yaungade kugorosa, uye sarudza kana uchida mazano
Ndizvo! Kana iwe usingaone chako chakanakira vateereri, saka unogona kukumbira imwe nyowani kubva kwatiri uchishandisa kudonhedza kuruboshwe-kuruboshwe rwewebhusaiti.
Chibodzwa chaunoona ndicho chikamu chemukana wemavara ako ane chekuita zvakanyanya. Iyo AI ndeye 80%+ chaiyo, zvinoreva kuti misoro yako ikozvino ichabata maziso evaverengi vako vanokosha kakawanda.
Chii chinoitika kana waenda kuhutachiona?
Kupa chigadzirwa kana sevhisi yako mukana wakanakisa wekuenda kuhutachiona kunogona kushandura hupfumi hwekambani yako zvakanyanya. Ndiwo mutsauko pakati pegore rekutengesa rekodhi uye kuchengetedza chimiro quo.
Mukana wako wakanakisa wekukura uye kuenda kuhutachiona kushandisa SlayerAI kuona kuti iwe unonyatso shandisa yako yekushambadzira kuedza. Saina izvozvi uye uwane mavhiki maviri eSlayerAI akasununguka zvachose!
Saina Kuti uwane Muedzo weSlayerAI
kuburitsa: Ndiri kushandisa yangu affiliate links kuAmazon uye SlayerAI munyaya ino.
Tags: ad kopiaitinya-kuburikidza chiyeroContent Marketingzvemukati optimizationctremail yakazaruka mitengoemail subject line optimizationoptimization yemusoro wenyayaheadlineskuwedzera ad ctrkuwedzera kudzvanya-kuburikidza chiyerowedzera email yakavhurika mitengowedzera yakazaruka mitengooptimizing misoro yenyayamuurayisubject line optimization
Maitiro Ekubatanidza Mapositi uye Tsika Post Types muWordPress Mibvunzo uye RSS Feed